तमू गुरुङहरुको सफलता यात्रा फेसबुक र गुगलसम्म – Tulsimedia
२४ असोज, पोखरा
जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ? नेपालमै पढेर फेसबुक र गुगल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरिरहेका नेपाली युवा डा. टोपराज गुरुङ भन्छन्, ‘सफलताका लागि महत्वकांक्षा, स्पष्ट कार्यदिशा, धैयर्ता, लगनसिलता, निरन्तरता र दृढ इच्छा शक्ती आवश्यक पर्दछ ।’
कास्कीको पोखरामा विद्यालय शिक्षा र काठमाडौंमै कलेज शिक्षा लिएका उनी यही मन्त्रले फेसबुक र गुगलसम्म पुग्ने सफलता मिलेको सुनाउँछन् । ‘सफल जीवनका लागि एउटा अनुशासित शैलीलाई पछ्याउन आवश्यक छ’, उनी भन्छन् ।
जुममार्फत शुक्रबारबाट भर्चुअल्ली सुरु गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय तमू सम्बाद शृंखलाको दोस्रो दिनको पहिलो सेसनमा शनिबार उनले आफ्नो सफलताको कथा सुनाए । उनी लक्ष्य, योजना र त्यसको कार्यान्वयनको तीन चरणबाट सफलता अघि बढ्ने बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय तमू परिषद्को आयोजनामा शुक्रबारबाट ‘भर्चुअल्ली’ सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय तमू सम्बादको दोस्रो दिन तमू गुरुङहरुको सफलताको यात्रा शिर्षकमा छmलफल भएको हो ।
विद्यावारिधी गर्दा गर्दै सन् २०१३ मा गुगलसँग सम्बन्धित भएका टोपबहादुरले सन् २०१५ देखि ०१९ सम्म फेसबुकमा काम गरेका थिए । उनी अहिले फेरि गुगलमै फर्किएका छन् । उनी उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका पुगेका हुन् ।
उनी नेपालमै फर्केर देशका लागि योगदान पु¥याउने योजनामा रहेको बताउँछन् । ‘देशका लागी महाबीर पुन दाइले ठूलो योगदान पु¥याउनु भएको छ । मेरो उदेश्य पनि यसरी नै देशका लागि योगदान पु¥याउने नै रहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘भविश्यमा म आफ्नो यो उदेश्य पूरा गर्ने छुँ ।’
शनिबारको सम्बादको अर्की वक्ता त्रीभुवन विश्वविद्यालयकी पहिलो गुरुङ महिला प्राध्यापक लालकुमारी गुरुङले सफलताका लागि परिवारको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिन् । भारतमै जन्मी हुर्केर आफ्नो जीवन नेपाललाई सुम्पिएकी उनी भन्छिन्, ‘जीवनमा धेरै उतार चढाव आउँछन् । त्यसमा अल्झिएर बस्नु हुन्न । परिवारको साथ र सहयोग हुने हो भने अघि बढ्न धेरै सहज हुने छ ।’
भारतीय सेनाबाट अवकास प्राप्त मेजर जनरल गोपाल गुरुङले युवाहरुलाई अवसर खेर जान नदिन सुझाव दिए । विभिन्न कारणले इन्जिनियर बन्ने सपना त्यागेर सैनिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी युवाहरुलाई सफलताका लागि जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनु पर्ने सुझाव दिन्छन् ।
‘तपाईहरु आफ्नो समूदाय वा आफ्नो जरो किलोसँग जोडिरहने प्रयास गर्नुहोस् । यसले पनि तपाईहरुलाई अघि बढ्ने हौसला मिल्ने छ’, उनी भन्छन्, ‘चुनौती आउँछन्, त्यसलाई सामना गर्नुपर्दछ । अवसर खेर जान दिनुहुन्न । सफलता प्राप्त हुने नै छ ।’